FIIRSO Sawirro: Beel ka Mid ah Beelweynta Abgaal oo ka cabanaysa dhulkooda oo beel kale ay ku haysato? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA FIIRSO Sawirro: Beel ka Mid ah Beelweynta Abgaal oo ka cabanaysa...
FIIRSO Sawirro: Beel ka Mid ah Beelweynta Abgaal oo ka cabanaysa dhulkooda oo beel kale ay ku haysato?
Beesha Kabaale, Wacbuudhan ee Abgaal, ayaa waxay cabasho xoogan ka muujisay dhul ay leedahay, oo beel kale ay ku haysato, iyadoona Dowladda Somaliya ugu baaqday in ay soo kala dhex gasho.
Labada beelood, ayaa isku haysta tuulada Burdheere oo 28km dhinaca galbeed kaga beegan Degmada Cadale. Beelahan ayaa dhawr goor ku wada dagaalamay tuuladaasi.
Odayaasha iyo waxgaradka ee Beesha Kabaale, Wacbuudhan oo Isniintii kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho, ayaa waxay Madaxda Dowladda Somaliya iyo kuwa Hirshabelle ugu baaqeen inay soo kala dhex galaan.
Odayaasha Dhaqanka waxay sheegeen in Beesha Kabaale, Wacbuudhan ay markasta nabad ku baaqeyso, sidoo kalana ay dooneyso in laga fogaado wax kasta oo keeni kara in dhiig uu daato.
Ibraahim Jilicow oo ka mid ah waxgaradka beesha, ayaa sheegay inay ku celcelinayan in colaadda la dhameeyo, isla-markaana laga wada shaqeeyo nabadda, oo uu ku sheegay midda keliya ee dhammaantood deeqda inay tahay.
Ibraahim Jilicow, ayaa sheegay in Madaxweynaha Somaliya, Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha ay ugu baaqayan inay dhegaha u furaan waxa ay ka cabanayan, isla-markaana ay ka codsanayan in si cadaalad ay ku jirto loogu kala garqaado.
Kulankan waxa uu ku soo beegmaya, iyadoo dadaalo beelahan walaalaha ahi la isugu soo dhaweynayo, ay ka soconayaan Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabellaha Dhexe.
dhulkaan Beesha Kabaale aay sheegtay in aay leedahay waxaa’ ku dagaalamay oo isku heysta Beelaha Celi iyo Cabdale oo ka mid ah Beelweynta Abgaal Cisman iyado shir dib u heshiisiin ah uu ugu socdo magaaada Jowhar.